Magaalaa Dhangaggootti Mootummaan manneen jireenyaa namootaa diigaa jira. - OMN
Magaalaa Dhangaggootti Mootummaan manneen jireenyaa namootaa diigaa jira.
OMN:Oduu Wax.27,2016 Harargee Bahaa Magaalaa Dhangaggoo Keessa – Kanneen Jiraatan Mootummaan Mana Yeroo dheeraaf Keessa jiraachaa turre keessaa ari’ee nu baasee nurratti diigaatti Jirraa jechuun himatu.
Beenyaan yookaan Lafti nuti irra qubannu tokko otuu nuuf hin laatamin diiggaan kun raawataa jiraa kan jedhan namooti kun manneen akka digamaniif murtaa’ee ammaaf 43 yoo ta’an kana keessaa hangi tokko guyyaa har’aa digamaa oolanii jedhu.
Jiraataan Magaalaa Dhangaggoo nuti dubbifne tokko akka jedhanitti ganama har’aa kaasanii Mana nurratti digaa jiruu, gar gar nu faffacaasanii rakkoo hamaa argaatti jirraa jedhu.
Mana har’a nurraa digamaa jiru kana keessa gariin keenya mootummaa Sadiif irra jiraanneerraa jedhu namni kun.
Dhimma kana irartti yeroo adda addaa bulchinsa Naannoo gaafannus deebii nuti arganne- Kun Humna keenyaan oli. Gubbaadhaa gadi nutti dhufe waan ta’eef homaa gochuu hin dandeenyu deebi jedhu nuu deebisanii jedhan. Akka namni kun nuu himanitti akeekachiis Maxxanfamee torban sadii gidduutti diggaan isaa eegalame.
Dhimma kana ilaalchisee nama nuti dubbifne kan biraan ammoo Maaliif akka Manneen kun diigamaatti jiran waan beettu hinqabdu. Hata’u malee Manneen garii ganama kana diiggaansaa eegalemee jetti. Tartibumaan digaatti jiru kan jettu shamarreen kun Maatii hedduun dursanii gadi dhiisanii ba’uu isaaniis nuu himtee jirti.
Dhimma kana ilaalchisee namooti nuu bilbilaniif nuu barreessan hedduun akka jedhanitti, otuma Ijaarsa seeraan alaa, manneen Kaartaa hin qabaanne ta’aniillee namooti Mootummaa sadii ol lafa kanarra jiraatan irraa ari’amanii kan biraaf laachuun seera miti jedhu. Namni tokko hanga lammii biyyattii ta’ee jirutti lafa irra jiraatu qabaachuu qaba.
Kanaaf, namoota kana irraa mana irratti diiganii karaa duratti harcaasuun otuu hintaane, hanga karaan irra hinbaanetti Mootummaan dhugumaan lammi isaaf dhaabbate yoo ta’e isaan keessa jiraniif kaartaan itti laatamuu bifa danda’u irratti hojjechuu qaba turee jedhu.
Hoogganoota Paartii KFO hidhaa jiran irratti ammas beellamni biraa qabame.
OMN: Ayyaanni Adiwaa har’a kabajame.
OMN:ODUU OLMAA OROMIYAA ADO. 9, 2018
OMN:ODUU ADOL 4/2018
OMN: Oduu 1 (Adol 4, 2018)
Oromia Media Mar 2, 2019
Adwaa - 123ffaa Injifannoo Adwaa waggaa 123ffaa yaadachuuf Abbootiin fardaa kutaawwan Oromiyaa…
OMN: HAALA YEROO ITOOPHIYAA FI OROMIYAA OB. JAWAAR MOHAMMAD WALIIN…